Kameleoon: Igwe Njin AI iji buo amụma gbasara ntụgharị ndị ọbịa | Martech Zone
Kameleoon: Igwe Nchọpụta AI iji bulee amụma ntụgharị nke ndị ọbịa
Tọzdee, Ọktoba 1, 2020 Tọzdee, Ọktoba 1, 2020 Douglas Karr
Kameleoon bụ otu ikpo okwu maka ntụgharị mgbanwe njikarịcha (CRO) site na nyocha A / B na njikarịcha na nhazi oge na-eji ọgụgụ isi. Kameleoon si igwe-mmụta algọridim gbakọọ ihe puru omume nke onye nleta ọ bụla (amata ma ọ bụ na-enweghị aha, onye ahịa ma ọ bụ atụmanya) na oge, na-ebu amụma nzụta ma ọ bụ itinye aka ya.
Nnwale Kameleoon na Nhazi Platform
Kameleoon bụ weebụsaịtị dị ike na nchịkọta zuru ezu nnwale na keonwe ikpo okwu maka ndị na-ere ngwaahịa na dijitalụ na ndị na-ere ahịa na-achọ ịbawanye mgbanwe ma na-eme ka ọnụọgụ ego na-enweta n'ịntanetị. Site na njirimara tinyere ule A / B, nkewa onye ọrụ, ịkpa agwa omume na data oge, Kameleoon na-enyere ndị azụmaahịa aka ịbawanye ntugharị n'ịntanetị ma bulie ego ha ga-enweta.
Forrester gbara ọtụtụ ndị ahịa Kameleoon ajụjụ ọnụ miri emi n'ofe ọrụ gụnyere e-commerce, njem, ụgbọ ala na mkpọsa maka nsonaazụ ha.
Kameleoon Uru a chọpụtara n'ime afọ atọ gụnyere:
ruo 15% mmelite na ọnụego mgbanwe site na ichota ihe nlere nke ndi nleta weebụ na hazie mmekorita nke ime ka ntughari di nma. Nke a na - anọchite anya uru afọ atọ gbanwere n'ihe ize ndụ nke $ 5,056,364 na uru ugbu a.
ruo 30% mmụba na azụmahịa na-ere ahịa, site na nyocha akparamagwa na nke dabere na gburugburu nke Kameleoon na-enyere ụdị aka ịbawanye ọnụọgụ nke mgbasa ozi ire ahịa na-aga nke ọma. Nke a na - anọchite anya uru afọ atọ ga - aba uru nke $ 577,728.
49% Mbelata na mgbalị ntọlite ​​mkpọsa. Ike nke ike Kameleoon nke AI nyere ike ya na oke ike nke ihe eji abanye na websaịtị ịtụghari ihe nke ọma belata oge achọrọ iji melite mkpọsa na imewe ahụmịhe weebụ yana mmekọrịta, ebe ị na-abawanye nnwere onwe nke ndị ahịa nwere nghọta na mmekọrịta enyi na enyi. Nke a na-anọchite anya uru nke $ 157,898 na uru dị ugbu a karịa afọ atọ.
Na mgbakwunye, ndị ahịa gosipụtara uru ndị a na-erughị eru:
Ahụmịhe Ndị Ahịa (CX) - Site na inye aka ịnyefe ọdịnaya na ozi ahaziri, Kameleoon na-enye ndị otu ohere ịnye ahụmịhe ahaziri nke ahụ.
Ahụmịhe ndị ọrụ bara ụba (EX) - Ndị ọrụ na-enwe ike karịa ka ha nwere ike ime mgbanwe na mgbanwe dị mfe n’ihe gbasara nkeji, si etu a na-enwewanye mmeghachi omume na nkwụghachi - na ike n’ọrụ ha.
Inyefe ahaziri iche, ahụmịhe dijitalụ nke mmadụ bụ ugbu a maka isi nweta azụmaahịa - yana ọrịa na-efe ngwa ngwa mkpa maka ụdị iji lekwasị anya na nnwale na ịhazi onwe. Nke a na-amụ na Forrester si nnyocha na-egosi otú ike na ịdị mfe nke iji Kameleoon na-akwado enterprise ahịa na-esiwanye asọmpi, digital-mbụ ụwa, anapụta ngwa ngwa ROI na ịrịba-okwu ogologo oge ego uru.
Jean-René Boidron, Onye isi, Kameleoon
Tupu iji Kameleoon, ndị ahịa ọ bụla enweghị ikike ọ bụla ọ bụla ma ọ bụ jiri nyiwe nyocha A / B nke na-enweghị injin amụma na akara ngosi. Ha chere na ha enweghị ikike iji bulie ọnụego ntụgharị site na ime ka imepụta ahụmịhe weebụ ezubere iche.
N'ime ụlọ ọrụ ndị isi 450 na-adabere na Kameleoon, na-eme ya n'elu ikpo okwu SaaS maka nhazi nke AI na Europe. Ndị a gụnyere ndị isi na ecommerce na mkpọsa (Lidl, Cdiscount, Papier), mgbasa ozi (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), njem (SNCF, Campanile, Accor), ụgbọ ala (Toyota, Renault, Kia), ọrụ ego (Axa, AG2R, Ebe E Si Nweta Agricole) na ike (Providence). Kameleoon na-enweta afọ atọ na-eto eto kwa afọ na ndị ahịa na ụtụ.
Rịọ Kameleoon Demo
Tags: ule uleainhazi onwe onyeAi-chụpụrụ nkewaAnalyticsAmamịghe echicheihe puru omumecrokameleonkcskeonweỌkụ
MetaCX: Jikwaa Ndụmọdụ Ndị Ahịa Na-arụkọ Ọrụ Na Nweta Sị na-arụpụta Ihe